ကဗျာကိုအထာနဲ့ဖတ်ပီး အထာနဲ့ ကွန့်မန့်ရေးသွားပါကြောင်း :P
အထောက်အထားမဲ့ အထာတွေ ထိုးထည့်
ထိန်နေအောင် ထွန်းလည်း ထွက်လာတဲ့ အလင်းမှာ အထွာနဲ့ ။
ထိတော့ ထိတယ် ။
... အထာနဲ့ ။
အထာနဲ့ ပေမယ့် အသေချာကြီးကို သိသွားတယ် အထာနဲ့ကမ္ဘာမကြေ ဟိုဖိုးဖိုးကြီးကို ကမ္ဘာမကြေတာ အထာနဲ့ ပြောသွားပြီးး :)
အထာ ကိုင်မနေနဲ့ ပန်ဒိုရေ..
ကဗျာတွေကို တန်ဘိုးထားသိမ်းချင်လွန်းလို့ ပါ...။
လေးလေးစားစားကို ချီးကျုးပါတယ် ပန်ဒို..။
ဒီလိုပဲ..တို့တွေလည်း အထာနဲ့နေရတာပဲး)
အဆိပ်ကောင်လိုပဲ။ ပေါက်ကွဲမှု သံစဉ်တွေက ကဗျာ လှလှလေးတွေ ထွက်လာတယ်။ ခဏခဏ ပေါက်ကွဲအောင် ဆွပေးမှ ထင်တယ်။ အဟီး။ :D
ခိုက်တယ်ဗျာ။ Slang တွေကို သုံးပြီး ထိမိတဲ့ ကဗျာစပ်ထားတော့ ....
ပန်ဒိုရာရေ.. ကဗျာက ကောင်းလွန်းလို့ ..
အထာနဲ့ အပေါ်က ပြောသွားတဲလူတွေ ပြည့်စုံနေပြီ..
အထာနဲပဲ ထပ်ပြောခဲတော့မယ် ....မိုက်တယ်..။
ဖတ်ပြီး အထာနဲ့ ပြန်လို့ မရတော့ဘူး။ အထာခေတ်ကို အထာနဲ့ ထင်ဟပ်တဲ့ ကဗျာကောင်းတစ်ပုဒ်ပဲ။
really nice poem. it'll be very nice to recite especially the voices in the end.
ပန်ဒိုရာဆိုတဲ့အမည်ကို အထာနဲ့ ကြည့်လိုက်တယ်။
သေချာဖတ်ပြီး အိုက်တင်အပြည့်နဲ့ ခေါင်းကိုတောင်ဘက်နည်းနည်းမြောက်ဘက်နည်းနည်း အထာနဲ့ ရမ်းလိုက်တယ်။
မယ်ပန်က ဆရာကျတာကို အထာနဲ့ ပြသွားတယ်..
အဲဒီအထာက တော်တော် တာသွားတာတော့ အမှန်ပ အရီးရေ...
You are amazing at writing such poem, impressive! I always read your blog, keep it up girl! Cheers,
မပန်ရေ - မပန်ရဲ့ လက်ရာကောင်းတွေထဲက နောက်တစ်ခုပေါ့။ ဖတ်ရတာ ကောင်းလွန်းလို့ တိုတယ်တောင်ထင်ရတယ်။ ကျေးဇူးပါမပန်ရေ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့လဲ မီးပျက်တဲ့မြို့တော်ကြီးမှာ အထာနဲ့ .... အဟတ် :)
အထာတော့ ကျနေပြီ၊ ကဗျာလေးက... အထာပဲဗျာ...
ကိုယ့်ဆင်ဆာ ကိုယ်တင်ထားရတယ် အထာနဲ့
ကဗျာကို လာဖတ်ပြီး အားပေးသွားတဲ့ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တခါတလေ စိတ်ကူးပေါက်လို့ ထွက်ကျလာတယ်ပဲ ဆိုပါတော့။
ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာ။ နောက်ဆုံးမှ ဖတ်မိတာ နာတယ်။
မပန်ရေ . . လေးစားတယ်။ တကယ်လေးစားတယ်။
ကောင်းတယ်လို့ ပြောမယ်… အထာကော်မန့် တော့ မဟုတ်ဘူးနော်… ယုံ…
ဒီနေ့နောက်တစ်ခေါက် လာဖတ်ပြီးတော့ ကောင်းလိုက်တာလို့ ပြောချင်လို့ပါ။